Japana Asehoy ny mizara mandroboka ao amin'ny Tokyo bitany - News Fitsipika
Japana Asehoy ny mizara mandroboka ao amin'ny Tokyo bitany
iPad Air (sary: John.Karakatsanis)
Anjara ao Japana Display — lehibe indrindra manerana izao tontolo izao Mpanao ny efijery ho an'ny finday avo lenta sy ny takela-bato, ary ny fanalahidy Apple mpamatsy — nampiditra eo amin'ny Tokyo bitany Alarobia, manaraka ny $3.2 lavitrisa voalohany fanatitra bahoaka.
ny tahiry, amin'ny sehatra iray izay very kokoa noho ny fahadimy ny ny vidiny, nihatra 763 Yen, iray 15.2 isan-jato rano indray mitete avy amin'ny 900 Yen lisitra Price, amin'ny iray mpandalina mamaritra ny fatiantoka ho toy ny “loza”.
Ny benchmark Nikkei tahiry fanondroana vita 0.36 isan-jato ambony.
Ny ranon-javatra miseho Mpanao kristaly tamin'ny herinandro lasa priced ny fanatitra-bahoaka voalohany amin'ny farany ambany dia ambany ny zavatra andrasana, milaza fa ireo mpampiasa vola Mitandrema momba ny fivarotana, fa nisisika fa ny fangatahana dia mafy.
Japana Asehoy ny mihazona ny tari-dalan'ny 16 isan-jato ny fitomboan'ny $35 lavitrisa maneran-tsena ho an'ny finday avo lenta sy ny tablette efijery, araka ny fikarohana US-miorina mafy NPD Group.
Ary ny IPO dia iray amin'ireo lehibe indrindra any Tokyo hatramin'ny Suntory misotro goavam-be ny sakafo, ary-zava-pisotro vondrona natsangana $3.9 lavitrisa in 2013.
Na izany aza, mpandalina efa nampitandrina azy mafy miatrika fifaninanana amin'ny vidiny ambany-firenena, anisan'izany ny Shina, Korea Atsimo sy Taiwan. MBA hamaliana izany, ny mafy — nanangana in 2012 ny alalan 'ny Fampitambarana Hitachi, Toshiba sy Sony ny fatiantoka-manao LCD vondrona — Mitady ny hampitombo ny famokarana ny madinika sy salantsalany-salantsalany efijery.
saingy Seiichi Suzuki, tsena mpandalina ao amin'ny Tokai Tokyo Fiarovana, nilaza AFP: “Izany dia orinasa izay natao ny ny vondrona offloaded araka ny ray aman-dreny orinasa. (Tsy) manana hoavy mamirapiratra.”
Ary hoy ny mafy tsy tokony hanana “voatery ny lisitra”, nanonona ny sarotra tsena tontolo iainana amin'ny Nikkei Index nidina manodidina 10 isan-jato tamin'ity taona ity.
– 'Tena mandiso fanantenana’ –
Japana Asehoy ny teo aloha nanao hoe: mety mivarotra 140 tapitrisa mizara vaovao amin'ny eo 900 Yen ary 1,100 Yen, raha ny tompon'ny petra-bola tsy miankina lehibe no offload 213.9 tapitrisa mizara.
“A loza, tsy isalasalana,” Lorne Steinberg, lohan'ny Montreal-monina Lorne Steinberg Harena Management, Dow Jones nilaza Newswires.
“Ny fifanarahana dia tsy maintsy efa na ratsy na ny mpampiasa vola mispriced fototra dia misjudged. Tany Amerika Avaratra, mpivarotra zatra manohana IPOs, ka dia izany karazana fampisehoana fanokafana ihany no mety hitranga raha manontolo koa tsena nandeha tampoka ratsy tamin'izany andro izany.”
Chris McGuire, lehiben'ny mpanatanteraka ny Chicago-monina fefy tahirim-bola Phalanx Capital Management, dumped rehetra ny mizara ny mafy nividy amin'ny malalaka.
“Price an'ilay fiakarana, be latsaka dia tena mandiso fanantenana, ary mampiseho fa ny fifanarahana dia overpriced amin'ny olana,” hoy izy:.
Apple mahatonga efa ho ny ampahatelon'ny Japana Display ny vola miditra, fa ny mafy ihany koa ny mifandray amin'ny hafa Gadget mpanao ambony toy ny Samsung sy Microsoft.
Ny orinasa Niforona ny tanjona ny orinasa japoney manampy tsara kokoa ny hifaninana amin'ny avo-fanapahan-kevitra miseho teknolojia, izay efa lasa ny fitsipika ho an'ny finday avo lenta, Takelaka sy ny fitaovana elektronika.
Ny governemanta tohanan'ny Innovation Network Corp ny Japana natao momba ny 70 isan-jato anjara ny mafy, amin'ny telo goavam-be elektronika samy milaza ny teny mafy 10 isan-jato ny tsatòka.
Maro ny Japoney fitaovana elektronika sy ny teknolojia goavam-be efa niady mafy tao anatin'ny taona vitsivitsy, rehefa miatrika Price undercutting vahiny mpifanandrina sy mampanaintaina fatiantoka amin'ny mpanjifa sasany vokatra vondrona, anisan'izany ny fahitalavitra izay soa sisim-manify dia manify.
-Mahery indray mandeha orinasa toy ny Sony sy Panasonic no tojo mampalahelo rafitra taorian'ny taona maro ny fatiantoka.
Sony tamin'ity volana ity nilaza fa dia mivarotra fananana amin'ny malaza Tokyo toerana izay nisy ny foiben'ny enina taona, toy ny taloha izao tontolo izao nikapoka mafy miady mafy mba hanamboarana ny Fehiny.
Ity lahatsoratra ity, Japana Asehoy ny mizara mandroboka ao amin'ny Tokyo bitany, dia mpilaza vaovao avy amin'ny AFP, ary dia nandefa eto nahazoana alalana. Copyright 2014 AFP. Zo rehetra voatokana
25631	0 Paoma, Chicago, iPad, Japana, Japana Display, Seiichi Suzuki, Sony, Tokyo
← Aretim-po misdiagnosed toy ny tebiteby amin'ny vehivavy 'Chicken avy amin'ny helo’ Mampiseho fahazavana vaovao eo amin'ny vorona-toy ny dinôzôro →